Halkan ka akhri lix qodob oo ka soo baxay shirkii beesha ciidagale ee london BARKHADLE1 | Salaan Media
Waxa manta ka qabsoomay caasimadda dalka ingiriiska ee London shir weynihii beesha ciidagale ee BARKHADLE1.
Shirkaas oo ay soo qabanqaabiyeen gudidda beesha ee dalka UK oo ururka gaaroodina nagala qayb qaatay loona igmaday hirgelintiisa haweenka beesha ee degan degmadda harrow London.
Halkaas oo ay isugu yimaadeen dad fara badan oo ka kala yimid gobolodda UK oo rag iyo haweenba leh waxa
lagu furay aayadaha quraanka ah sidii caadadu aheeyd, kadibna shirka waxa furay gudoomiyaha beesha abokor maxammed
oo u mahad celiyey dadkii sharafta lahaa ee madasha iskugu yimid kadibna ka waramay waxqabadkii gudidda iyo marxaladihii
ay soo martay iyo wakhtiga gudidda mudadeedii ka hadhay,waxaa isna ka hadlay gudoomiyaha ururka samafalka ee gaaroodi
oo ka warbixiyey wax qabadkii ururka iyo waxay
maagan yihiin inay qabtaan mustaqbalka dhow,waxa kaloo ka hadlay oday aabi xujaale
oo taariikhdii beesha dulmaray in isku duubnaanta wax lagu gaadhanna ku teliyey waxaa kaloo ka hadlay fawsi xaaji Yusuf xoghayaha beesha oo sheegay muhiimadda in shirkani midho dhal yeesho iyo maxammed xasan jafal iyo khaddar koodbuur oo si wada jir ah uga warbixiyey xaaladda kililka shanaad,
iyo oday abdi abdilahi mooge oo ereyo dhiiri gelin ah oo qiimo badan leh soo jeediyey waxa iyana ka hadashay marwo amina xaashi guuleed oo hadal guubaabo ah ka jeedisay goobtii waxa iyana ka hadlay hablihii gaaroodi oo ka war bixiyey wax qabadkoodii iyo dhakhtarkii sallaxlay oo la furay lana qalabeeyey oo ururka bisha cas caawimo laxaadle ka geystay waxa kaloo goobtaas hadal qiimo badan leh ka jeediyey maxammed Yusuf diirqadhaadh oo ka waramay wadadii cadeeyd,sidoo kale waxa isna si mugleh uga hadlay wadada cad maxamuud lugweyne,muuse bootaan,ismaciil maxamuud danbas.
Waxa goobtaa lagu ururiyey lacag dhan 25 kun oo dollarka mareykanka ah oo lagu caawin doono wadadda cad. Intaa kadib waxa lagaga dhawaaqay madashii ururka dhalinyaradda beesha ee London oo loo bixiyey ( gacan qabad)oo gudidda ka hoos shaqeeyn doona una fududeeyn doona ururinta lacagta wadadda cad ee london, waxaa isna duco iyo mahad naq ku af jaray ururintaas lacagta gudoomiyihii hore ee beesha UK sheikh Ibrahim maxammed yusuf markaas waxaa shirkii soo gabagabeeyey kana akhriyey goobtii go?aamadii shirka ka soo baxay gudoomiyaha beesha abokor maxammed ismaciil.
Waxa shirka barkhadle1 kasoo baxay lix qodob oo muhiim ah.
1) in jiritaanka Somaliland yahay muqaddas lama taabtaan ah.
2) in shirka barkhadle2 ee suldanka guud iyo gudidda beeshu iclaamiyeen la taageero.
3) in beeshu hesho xaqa iyo saamiga ka maqan haday tahay golaha xukuumadda,shaqaalaha dalka iyo ciidamadda qalabka sidaba.
4) in biya la?aanta magaaladda hargeysa wax laga qabto xukuumaduna xooga saarto.
5) in Somaliland nagalla wada qayb qaadato dhismaha wadadda cad oo gacan nalagu siiyo.
6) in beeshu xoojiso xidhiidhka beelaha deriska ay yihiin oo dhan.